नेपालमा ५५ लाख नागरिकमा मानसिक समस्या ! | Ratopati
मानसिक रोगीलाई लक्षित गर्दै सरकारले वि.सं. २०४९ सालमा स्थानपना गरेको मानसिक अस्पताल देशकै अभिभावकको भूमिका निभाइरहेको छ ।
मानसिक रोगी कम भएर हो या सरकारले चासो नदिएर हो, मानसिक रोगी किन पाटन अस्पताल आउन मान्दैनन् ? आए पनि कुन अवस्थामा आइपुग्छन् ? निको हुने सम्भावना कति रहन्छ आदि विषयमा पाटन अस्पतालको अवस्थाबारे अञ्जु तामाङले निर्देशक डाक्टर मोहनराज श्रेष्ठ (लाखे) सँग गरेको कुराकानी :
मानिसक रोगी सुरुमा धामीझाँक्रीमा जान्छन्, त्यसपछि जिल्ला अस्पताल अनि बल्ल तेस्रो पटक मात्रै अस्पतालमा आइपुग्छन् । समस्या देखिन साथ अस्पताल आउने भनेको १० देखि १५ प्रतिशत हुन्छन् होला । नेपाल सरकारको केन्द्रीय अस्पताल भएको कारण कडाखालका मानसिक रोगी यही अस्पतालमा आउने गरेका छन् । कडाखालको मानिसक रोग कुल जनसङ्ख्याको १ देखि २ प्रतिशतलाई मात्रै हुन्छ । तर हरेक रोगबाट दिमागमा असर हुने भएको कारण २० देखि ३० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सामान्य खालको मानसिक रोग हुन्छ । जसअन्तर्गत उदासिनता, मन आत्तिने, लागूपदार्थ दुव्र्यसनी जस्ता बिरामीहरू बढी देखिन्छ । पछिल्लो समय त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, प्रसूतिगृह, मेडिकल कलेजहरूमा मानिसक विभाग सञ्चालन गरिएको छ । त्यहीँ उपचार हुन्छ । कडा खालको मानसिक रोग प्रतिशतको आधारमा कम भए पनि नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण निकै फरक छ । मानिसक रोग भनेपछि यो बौलाएकै हो भन्ने ठान्दा रोगीलाई झनै समस्या भइरहेको छ ।
तर मानसिक रोग नियमित औषधि सेवन गरिएन भने बल्झिने सम्भावना बढी हुन्छ । एक पटक डिप्रेसन भयो भने दोस्रो पटक ५० प्रतिशतलाई हुने सम्भावना हुन्छ र तेस्रो पकटसम्म ९० प्रतिशतलाई दोहोरिने सम्भावना हुन्छ । सामान्य प्रक्रियामा आउने रोग हो भने ६ देखि १२ हप्तासम्म नियमित औषधि सेवन गरेको खण्डमा ठीक हुन्छ । त्यसपछि ६ देखि ९ महिनासम्म अर्काे पटक औषधि खानुपर्ने हुन्छ । टिभी, मधुमेहको जस्तै यो रोगको औषधि पनि नियमित खानुपर्ने हुन्छ । मानसिक रोगीमा औषधि खाने अनि सामान्य अवस्थामा आएपछि छोड्ने प्रवृत्ति धेरै भएको हँुदा बल्झिने सम्भावना बढी हुन्छ ।
अरू अस्पतालमा जानु र मानसिक अस्पतालमा आउनुको सिनारियो निकै फरक रहेको छ । टिचिङ अस्पतालमा मासिक रोगी लगियो भने खासै शङ्का गरिन्न । त्यहाँ सबै प्रकारको रोगको उपचार हुन्छ । तर हाम्रोमा सामान्य टाउको दुखेर उपचार गर्न आउँदा पनि मानसिक रोगी (बौलाएर) आएको भन्ने छाप छाप पर्छ । यही कारणले पनि रोगीहरू अस्पताल आउन चाहँदैनन् । मुख्यतः युवा उमेरका महिलाहरू आउनै चाहँदैनन् । हाम्रो अस्पतालमा सीसीक्यामेरा राखेको छैन तर पनि यहाँ आएपछि चिनेको मान्छेले देख्यो भने ला यसलाई पनि मानसिक रोग लागेछ भन्ने अरूलाई पनि भनिदिने डर मान्छन् । त्यसैले बिरामी रोगभन्दा पनि अरूले थाहा पाउलान कि भन्ने डरले नै आउँदैनन् । यहीँका बिरामी पनि अल्का अस्पताल, टिचिङ अस्पताल जान्छन् । यहाँ आउने भनेका विपन्न परिवार, दुर्गम गाउँबाट आउने, उपचार गर्नुपर्यो भनेर चिठ्ठी बोकेर आउने मात्रै आउँछन् । यही कुरालाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ट्रिटमेन्टग्याप भन्ने गर्दछ ।
मानसिक नामले नागरिकमा नराम्रो छाप बसेको छ । यसलाई हटाउने हो कि भन्ने कुरा पनि भएको छ । मुलुकी ऐनमा पनि निर्वाचनको आचारसंहिताको कुरा गर्ने हो भने उम्मेदवारले भर्ने फारममा (बौलाह) अर्थात मानसिक रोग नभएको व्यक्तिले उम्मेदवारी दिनुपर्ने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । कानुनी रूपमा नै चलेको बौलाह शब्दलाई हटाउनुपर्ने कुरा पनि उठेको थियो । तर हटाउन गाह्रो छ ।
केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा मानिसक अस्पताल मात्रै रहेको छ । तर मानसिक भन्ने शब्दले नागरिकलाई समस्या भइरहेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय सञ्चालन भएका मानिसक अस्पतालहरू भए पनि नाम मानसिक राखिएको छैन् । तर नेपाल सरकारले यही नाम राख्दा बिरामीहरू आउन सकेका छैनन् । नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर छलफल पनि नभएको होइन तर अहिलेसम्म परिवर्तन हुन सकेको छैन । हामीले बिरामीसँग जनरल बेडको ५० रुपियाँ र क्याबिनको २ सय ५० लिने गरेका छौँ । भर्ना भएको बिरामीका लागि खाना फ्री र अस्पतालको फार्मेसीमा भएको औषधि पनि फ्री नै दिने गरेका छौँ । हाम्रो अर्काे समस्या भनेको केन्द्रीय अस्पताल भए पनि हामीसँग ५० बेड मात्रै छन् । बाहिरी जिल्लाबाट बिरामी एम्बुलेन्स राखेर ल्याएको हुन्छ तर उपचारपछि बेड छैन भन्दै भारी मनका साथ बिरामी पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । यो विषयमा सरकारलाई जानकारी पनि गराएका छौैँ । योजना छ तर काम छैन । योजना मात्रै भएर हुन्न सुनुवाइ पनि हुनुपर्यो । स्वास्थ्यमा पर्ने मुख्य रोगमध्ये मानसिक रोग पनि एक हो तर भनेको जस्तो काम भएको छैन । सय बेडमा लाने भनेर ओएनएम सर्भे गरेको ३ वर्ष भयो तर काम अहिलेसम्म भएको छैन ।